वार्ता र सहमतिको संभावना देखिएन अब
वार्ता र सहमतिको संभावना देखिएन अब। अब आन्दोलनलाई क्रांति मा लाने बेला आइसक्यो। यो सरकार र यो संविधान सभालाई फालेर एउटा अंतरिम सरकारको स्थापना गरेर यो आठ प्रदेशको नक्शा र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अंतरिम संविधानमा नै लेख्ने बेला आइसक्यो। जेठ १५ मा त्यो क्रांतिकारी अंतरिम संविधान घोषणा गर्ने सुरसार गर्ने बेला आयो। सुशीलको यहाँ बहादुर शाह जफरको रोल देखियो। ३० दलले यो आठ प्रदेशको नक्शामा सहमति बनाउने। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दामा सहमति बनाउने। अनि क्रांतिमा होम्मिने। एक दुई दिन नेपाल बंद गरेर केही हुँदैन। सरकार र संविधान सभा नढलेसम्म देश ठप्प पार्ने क्रांति चाहियो। २००६ को अप्रिल क्रांति सड़क भर्ने किसिमको थियो। अहिलेको क्रांति सड़क सुनसान हुने हुन सक्छ। अंतरिम सरकार स्थापना भएको एक वर्ष भित्र भने संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ। संविधान लाई वैधानिकता एउटा संविधान सभाले मात्र दिन सक्छ।
अंतरिम संविधान नमान्ने, राज्य (state) सँग गरिएका पुराना सम्झौताहरु नमान्ने, आफ्नो पार्टीको महासमिति नमान्ने मान्छे प्रधान मंत्रीको कुर्सीमा बसदिएपछि क्रांति बाहेक अरु विकल्प बाँकी रहँदैन। अबको क्रांति समझौता विहीन हुनुपर्छ।
Nationalities And Citizenship
Nepal And The Industries Of Tomorrow
constitution federalism Nepal Sushil Koirala
लोकतान्त्रिक सद्भावना फोरम (लोसफो) (DSF)
प्रक्रिया र आंदोलनभन्दा पनि Dysfunction तिर
सीके राउत र नेपालको न्यायपालिका
मधेसमा काँग्रेसको जग बलियो रहेन अब
चितवन मधेस बाट झिक्ने प्रयासले देश तोड्छ
स्वायत्त मधेस प्रदेश Negotiation टेबल मा होइन अंतर...
सीके राउत र अंतरिम संविधान
कुरुक्षेत्रमा जाने बेला आयो
Madhesh And Nuclear Power And Solar Power
अंतरिम संविधान सुशीलले पढेको कि नपढेको?
झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर र प्रच...
सहमति को संभावना
The State Does Not Exist
एकीकरण को लहर चलेको हो?
सरकार ढलने दुई तरिका
हुलाकी राजमार्ग को नाम बदलेर जानकी राजमार्ग राख्ने...
काठमांडु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक र निजगढ़ अंतर्राष्ट्री...
नेपाली काँग्रेस को महासमिति ठुलो कि सुशील ठुलो
Fundraising For Sagoon
नागरिकता र जातीयता: बर्मा, असम र मधेस
NRN संगठनका पद हरु र म
भारत बारे काठमाण्डु ले बुझनै पर्ने कुरा
काँग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकारको कल्पना...
भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप सबले सहमति भनेको अवस्था
सन्धि सम्झौता नमान्ने राज्यले आफ्नो अस्तित्व आफै स...